खाना पकाउँदै हुनुहुन्छ ? यस्ता गल्तीबाट बच्नुहोस् ! - Laltin Media
Home»लाईफस्टाइल»खाना पकाउँदै हुनुहुन्छ ? यस्ता गल्तीबाट बच्नुहोस् !
खाना पकाउँदै हुनुहुन्छ ? यस्ता गल्तीबाट बच्नुहोस् !
By लाल्टिन डट कम June 6, 2022 No Comments2 Mins Read
भान्सामा खाना कसरी पकाइन्छ भन्ने कुराले खानाको गुणस्तर निर्धारण गर्छ। हामीहरुले जानी-नजानी भान्सामा केही अनौठा गल्तीहरु गर्छौँ जसले खानाको स्वस्थतामै नकारात्मक असर पार्छ ।
स्वस्थ रहन खानेकुराको निकै महत्त्वपूर्ण हात हुन्छ। तर, हामीले भान्सामा गर्ने केही गल्तीले खाना अस्वस्थ्यकर बन्छ। त्यसैले ती गल्ती सुधारेर खानालाई स्वस्थ बनाउन जरुरी छ। आज हामी भान्सामा मानिसहरुले गर्ने भूलचुकको बारे चर्चा गर्न गईरहेका छौँ । ती भुलहरु यस प्रकार छन्:
धेरैजसो मानिसले तरकारी पकाउने क्रममा तेलबाट धूँवा निकाल्छन्। तेललाई धेरै तताउनु हानिकारक हुन्छ। बढी तताउँदा तेलमा रहेको एन्टिअक्सिडेन्ट नष्ट हुन्छ। त्यसैले कडा आगोमा तेल तताउनु हुँदैन। एकपटक खानेकुरा पकाएर बाँकी रहेको तेललाई दोस्रोपटक प्रयोग गर्नु हुँदैन।